စစ်ကောင်စီကို အပ်ငွေတွေ ထုတ်မပေးဖို့ စင်ကာပူသံရုံးကို တောင်းဆို — မြန်မာဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ဟာ နိုင်ငံခြား အရန်ဘဏ္ဍာငွေ ၆.၇ ဘီလျံလောက်ကို ပြည်ပက ဘဏ်တွေမှာ အပ်နှံထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာအစိုးရပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံရှိပြီး ကျန်တဲ့ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလျံလောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြင်ပက ဘဏ်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံခြား အရန်ဘဏ္ဍာငွေတွေက စင်ကာပူနိုင်ငံက ဘဏ်တွေမှာ အပ်နှံထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ရဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု executive order အမိန့်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အပ်ထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံကို ထုတ်ယူရွှေ့ပြောင်းလို့ မရအောင် freeze လုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားပါပြီ။
ကျန်ငွေတွေကို စစ်ကောင်စီက လွှဲပြောင်းရယူပြီး သူတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးပြုမှာကို ပူပန်မှုတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီနေ့ စင်ကာပူသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသူတွေက သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေကို ပြောပြထားတာကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Singapore has never beenademocratic country. It never has. Wake up!